Oromumaan keenyaan biyya iraa baqanee. Oromia Shall be Free |
Oromumaan keenyaan biyya iraa baqanee.
bilisummaa December 26, 2014	Comments Off on Oromumaan keenyaan biyya iraa baqanee.
By Habtamu Negashe Balcha
Yaka taka malee oromiyaa iraa fagaanee,
Kino haga araa biyatti hindeebinee.
Lami iraa addan baanne,
Firaan addan banne,
Ollaan addan banne.
Kino haga arraa oromumaaf jeenne,
Akka ilmaan shibiraa adunyaa iraa facaanne.
Hayyottin oromo maaf biya baqattan,
Baratton oromo maaf biya baqattan ,
Gotton oromo maaf biya baqattan?
Maalifissi tumaman ,
Biya keessa kan jiran?
Mee yakka maal qaban?
Biyyaa ofitif dubaachuu
Mirgaa ofitiif falmachuu
Mirgaa guutu qaban
Akka aritani biyaatii nuu deebisaa
Yookaan hin salphatan
Qabsoon tokko katee lamuu adda hin cituu
Boodaa hin raakatan
Da’ii biyya kesaa biyaara aritaan
Silaa maal barbadan,biyyaa waliin dhahuu
Oromiyaa diguu kana kayyoo qabdan
Oromiyaa diguu yomuu hin dandesaan
Namaa bishan cunfee
Nama aduu ilaale
Maalif taasa xartaan
Laaki nuura goraa bodaa hin gaabitaan
Nuu gabrumaa hin feenu kanaa beeku qabdan(x2)
Tags Habtamu Negashe Balcha walaloo
Previous Urgent- memo detailing Jawar’s Control on every aspect of OMN
Next Gaammee Booree: dhaamsa bara haara’aa